သင်ဒီမှာပါ: Home / မစ္ရွင္း
တချို့က Collection တံဆိပ်ခေါင်းများ, ငါသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှအစစ်အမှန် "ယခု" ဖြေရှင်းချက်ကိုစုဆောင်းပါ။
သူတို့ဟောင်းဖြေရှင်းချက်မကြာသေးခင်ဖြေရှင်းချက်သို့မဟုတ်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ကြောင်းမည်သို့ပင်သူတို့စုဆောင်းခွဲခြားခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်! သူတို့ထုတ်ကုန်စနစ်များ, အတွေးအခေါ်များ, စက်တွေရှိပါတယ်မည်သို့ပင်သူတို့စုဆောင်းခွဲခြားခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်!
တဦးတည်းအခွအေနေသာစစ်ဆေးနိုင်သည်သူတို့ယနေ့ရရှိနိုင်သူဖြစ်ရမည်နှင့် fix လုပ်ဖို့အခုအချိန်မှာသုံးနိုင်တယ်, ပြုပြင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Planet ကိုကမ္ဘာမြေအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေခြင်းနှင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ ပစ်မှတ်: အများအပြားဆက်ဆံရေးတ! 50% လျော့နည်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားအသုံးပြုအသစ်အဝတ်လျှော်စက်ကိုသင်နှင့်ကမ္ဘာဂြိုဟ်သည်မြေကြီးပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ တစ်ဦး 70% မီးလောင်ရာထိရောက်မှုနှင့်အတူတစ်ဦးကသစ်သားမီးဖိုတစ်မိသားစုလုံးတခုတခုအပေါ်မှာသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ပါးလွှာသောလေထုထဲကရေကိုတစ်ဦးကစက်တစ်ခုလုံးအသိုင်းအဝိုင်းတခုတခုအပေါ်မှာသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်!